Kaalmeenta luqada oo dugsiga xannaanada iyo dugsiga aasaasiga - Örnsköldsviks kommun
- Kaalmeenta luqada oo dugsiga xannaanada iyo dugsiga aasaasiga
Ardeyda dugsiga oo luqadooda hooyo eysan eheen iswiidhishka waxaa la bari iyo lagu kaalmeyn luqadooda.
Carruurta, 1 ilaa 5 sano, oo bilaabaan dugsiga xannaanada waxaa kaalmada luqada siin muddada koowad. Ujeedada baa waxey tahay in loo fududeeyo canuga, waalidka iyo shaqaalaha sidey bilaaw wanaagsan ugu noqoto bilaabida dugsiga xannaanada.
Carruurta wadanka ku cusub oo bilaabo fasalka ardeyda lix sano jirka waxaa lagu martiqaadi kaalmeenta luqada oo ey ku helaayaan luqadooda hooyo. Ujeedada baa ah in canuga la kaalmeeyo siduu ugu fududaato fahmida nidaamka dugsiyada iswiidhan. Ardeyda aan wadanka ku cusbeen laakin luqadooda hooyo eysan eheen iswiidhish waxaa lagu martiqaadi kaalmeenta luqadooda hooyo sidii loogu fududeeyo horumarinta luqada iyo waxbarashada.
Ardeyda wadanka ku cusub waxaa lagu martiqaadi kaalmeenta luqada hooyo. Ujeedada baa ah in ardeyga loo fududeeyo siduu u fulinkaro shuruudaha maadooyinka kale.
Waxbarashada luqada hooyo waxaa lagu martiqaadi haddii ardeyga waalidiintiisa hal ama labada waalid luqadooda hooyo ey tahay luqad aanan eheen iswiidhishka, luqado ey tahay mid nolol maalmeeda ey isticmaalaan iyo ardeyga aqoon aasaasi ka haysto luqada. Waxaa kale oo shuruud ah waa in ugu yaran shan ardey soo dalbadaan luqada iyo markaas jiro macallin arrintaas ku habboon.
Waxbarashada luqada hooyo oo luqadaha wadankaan kamid ah sida fiinlaandiska, jiddiska, meänkieli, romani iyo samiga waa in ardeyda lagu martiqaadaa haddii eysan eheen xitaa luq ey nolol maalmeedka isticmaalaan markey guriga joogaan. Waa haddii xitaa ardeyda soo dalbatay ey ka yartahay shan.
Ardeyda wadanka ku cusub waxey waxbarashada ka dhiganaayaan dugsiga sare oo degmada mas’uulka ka tahay oo dugsigaas baa laga helaa fasalada qaaska oo la qabsiga. Dugsiga sare waa laga helaa kaalmeenta luqada hooyo iyo waxbarashada luqada hooyo.
Haddii aad dooneysid inaad warbixin kale ka sii heshid kaalmeenta luqada la soo xiriir Karin Andersson, qeybta luqadaha[flerspråkigt centrum]: 073-274 56 01, flersprakigtcentrum@ornskoldsvik.se